भारतमा एकजना राइडरले आफ्नो पल्सर बाइकमा ट्याक्टर टायर राखेर कस्टमाइज गरेका छन् । पल्सर २२० को अगाडी चक्कामा ट्याक्टर टायर राखेर उनले कस्टमाइज गरेका हुन् । कस्टमाइज गरिएको उक्त बाइकलाई ती राइडरले पिच र कच्ची दुबै सडकमा सहजताका साथ चलाएका छन् । यसरी बा...
विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारण धेरैजसोले विवाहमा धेरै संख्यामा पाहुना लार्ई निमन्त्रणा गर्न सकिरहेका छैनन् । तर हालै मलेसियाको एक नव विवाहित जोडीले भने कोरोना भाइरसको कारण लगाइएका वन्देजहरुलाई चुनौति दिएका छन् । सरकारले मलेसिय...
सडकबाट २० फिट तल खस्दा पनि भिटारा ब्रेजाका यात्रु सुरक्षित, तस्बिर भयो भाइरल
भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा हाल एउटा कारको तस्बिर निकै नै भाइरल बनेको छ । मारुती सुजुकी भिटारा ब्रेजाको सो दुर्घटनाग्रस्त तस्बिरले सो कार सुरक्षित भएको प्रमाण समेत प्रस्तुत गरेको बताइएको छ । मारुती सुजुकी भिटारा ब्रेजाको सो कारमा चार यात्री सवार थिए ।...
अमेरिकामा पावरफुल बाइक राइड गर्दै सद्गुरु, सधै चर्चामा सद्गुरुको बाइक राइडिङ कला
सद्गुरु एक आध्यात्मिक गुरु मात्र होइन, एक सौखिन बाइक राइडर समेत हुन् । यसकारण सधै उनको चर्चा हुने गर्छ । सद्गुरुलाई कैयौ पटक बाइक राइड गरेको देखिएको छ । उनले पहिला पनि पावरफुल बाइक राइड गरिसकेका छन् । उनले कावेरी नदी संरक्षण अभियानको लागि होन्डा भीएफ...
एक रुसी युट्युबर, ब्लगर र मर्सिडिज एएमटी जीटी ६३ एसका मालिकले जर्मन कार निर्माताको विरोधमा अनौठो काम गरेका छन् । ती रुसी युट्युबर र ब्लगरले आफ्नै फोर डोर मर्सिडिज एएमजी जीटी ६३ एस कुपे स्पोर्ट्स कारमा आगो लगादिएका छन् । मिखाइल लिटविन नाम गरेका तीे यु...
हुन्डाईको शोरुममा सेल्स डग : टक्सन प्राइम
कुनै पनि गाडी खरिद गर्न जादा कम्पनीको शोरुममा एक सेल्सम्यान अवश्य हुन्छ । जसले ग्राहकलाई गाडी देखाउने गर्छन् र गाडीको वारेमा आवश्यक जानकारी प्रदान गर्छन् । तर ब्राजिलको एक हुन्डाई शोरुममा कुकुरलाई सेल्सम्यानको रुपमा काम दिइएको छ । सो कुकुरलाई कर्मचा...
फुटबलर रोनाल्डोले किने अर्को महंगो कार, विश्वमै १० युनिट मात्र उत्पादन हुने
चर्चित फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले विश्वकै महंगो कार खरिद गरेका छन् । उनले संसारमै विलाशी मानिने बुगाटी ला भोइटर नोइर कार ८.५ मिलियन युरो अर्थात करिव १ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा खरिद गरेका हुन् । सो कार विश्वभर १० युनिट मात्र उत्पादन हुने छन् । रोना...
वैज्ञानिकहरुले मुसालाई समेत गाडी ड्राइभिङ गर्न सिकाए (भिडियो सहित)
हात्तीले सर्कसमा साइकल चलाएको देख्नु भएकै होला । यसमा कुनै अचम्म मान्नु पर्दैन । किनकि कुनै पनि जनावरलाई केही कुरा सिकाउदा त्यसले सजिलै सिक्न सक्छ । अमेरिकाको भर्जिनियास्थित रिचमण्ड विश्वविद्यालयका अन्वेषकहरुले मुसालाई कार चलाउन सिकाएका छन् । सो परी...
यी व्यक्तिले बनाए कारमै सिलिङ फ्यान, हजारौ प्रतिक्रिया
एक जना ब्यक्तिले आफ्नो कारमै सिलिङ फ्यान बनाएका छन् । सो फ्यान कुनै उद्देश्यले भन्दा पनि रमाइलोका लागि मात्र बनाइएको उनको भनाइ छ । युजलेस इन्भेन्सनको नाममा फेसबुक र इन्स्टाग्राममा राखिएका उनको भिडियो निकै नै लोकप्रिय बनेको छ । कारको माथिल्लो भागमा र...
राजस्थानको अनौठो मन्दिर जहाँ रोयल इनफिल्ड बाइकको पूजा गरिन्छ
भगवानको मन्दिर सबैले सुनेको र देखेको हुन्छ । तर बाइकको मन्दिर कहिले सुन्नुभएको वा देख्नुभएको छ ? भारतको राजस्थानमा बाइकको मन्दिर रहेको छ । जसलाई भगवान जस्तै पूजा अर्चना गरिन्छ र आफ्नो इच्छा लागेको कुरा पनि मागिन्छ । आफूले मागेको कुरा पुरा हुने जनविश...
रोचक : कारमै बसेर लकडाउन पालना गरे शाहनवाजले
विवाहमा गाडी चलाउने ३० वर्षीय शाहनवाज करिब ५० दिन देखि गाडी मै बस्न बाध्य भएका छन् । उत्तर प्रदेशको बिजनौर स्थित सहसपुर निवासी शाहनवाज केही वर्ष देखि सिलमपुर स्थित चौहन बांगरमा आफ्नो भिनाजु र बहिनीसँगै बस्दै आइरहेका थिए । जुन बेला कोरोना भाइरसको कार...
ल्याम्बोर्गिनी किन्नका लागि ५ वर्षको बालक आफ्नै बुबाको गाडी लिएर हिडेपछि
अमेरिकामाा ५ वषे बाल एड्रियन जामरिप्पाले ल्याम्बोर्गिनी किन्नका लागि आफ्नो बुबाको गाडी ड्राइभ गरी लामो यात्रा गरेका छन् । हाल यो समाचारले निकै नै चर्चा पाइरहेको छ । ती बालकलाई आफ्नो बुवाको कार ड्राइभ गर्दै गर्दा पक्राउ गरिएको थियो । यद्यपि उनी ल्याम...
बजाज डोमिनार यसरी मोडिफाई भएर बन्यो सुजुकी हायाबुसा (भिडियो)
बजाज डोमिनार पनि कतै अर्कै कम्पनी अर्थात सुजुकीको हायाबुसा बन्छ ? हो बन्दो रहेछ । भारतका दिल्लीस्थित बिट्टु बाइक मोडिफिकेसनले यो कार्य गरेर सबैलाई चकित पारेका छन् । उनले यसको वारेमा भिडियो समेत बनाएर युट्युबमा पोस्ट गरेका छन् । भिडियोका अनुसार बजाज...
हेरौं गजबको फ्लाइङ मोटरसाइकल, ३० फिट माथिसम्म उड्न सक्ने
के तपाईंले फ्लाइङ कारको बारेमा सुन्नुभएको छ ? यसको भिडियो धेरै पटक मिडियामा पनि आएको छ । तर फ्लाइङ बाइकको बारेमा सुन्नुभएको छैन होला । हालै एक चिनियाँ व्यक्तिले फ्लाइङ मोटरसाइकल बनाएका छन्, जसलाई ३० फिट माथिसम्म उडाउन सकिन्छ । चाइना सिन्हुआ न्युजले...
हातले नसमाएरै १२५.७ मिटर सम्म गरियो ह्विली, भारतीय राइडरले कायम गरे रेकर्ड
कोभिड–१९ रोगको डरका कारण गरिएको लकडाउनको कारण संसारभर धेरै चिन्तित बनेका छन् । धेरै मानिसहरुको मृत्यु समेत भइरहेको छ । तर यही समयमा एक भारतीय सुपरबाइक राइडरका लागि भने खुसीको समाचार आएको छ । यसले मोटरस्पोर्ट्सका सबै फ्यानहरुलाई समेत खुसी तुल्या...
लकडाउनमा सामाजिक दुरीका साथ चलाउन यस्तो बन्यो रिक्सा, आनन्द महिन्द्राले गरे प्रशंसा
कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि सामाजिक दुरी उत्तम उपाय हो । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा सामाजिक दुरी कायम गर्नु उचित हुन्छ । तर लकडाउन पछि के यो सम्भव छ ? भारतको एक रिक्सा चालकले आफ्नो रिक्सालाई यसरी डिजाइन गरेका छन्, जसले गर्दा रिक्सामा चढ्दा पनि...
एक डिजाइनरले गरे मारुती ८०० इलेक्ट्रिक कारको यस्तो कल्पना, आउला बजारमा ?
रामशेखर दास एक कार डिजाइनर हुन् । उनले कुनै समय भारतमा चर्चित रहेको मारुती ८०० कारको अतित सम्झेर अन्तर्वार्ताको समयमा यसको भविष्य वारेमा एक राय ब्यक्त गरेका छन् । उनले टर्कीको एक सानो द्विपमा मारुती ८०० कार देखेका थिए । त्यसपछि उनलाई सो कारको इतिहास...
जब सुजुकी स्विफ्ट कार गोलचक्करमा सिधै हावामा उड्यो (भिडियो सहित)
पोल्यान्डमा सुजुकी स्विफ्ट कार चलाइरहेको एक व्यक्ति एकदमै अचम्मित तुल्याउने दुर्घटनाबाट बचेका छन् । सो घटनालाई सेक्युरिटी क्यामेराले कैद गरेको छ । सो घटना अघिल्लो आइतबार रबिन नामक चर्चको नजिक भएको थियो । सो घटना सम्बन्धी २० सेकेन्डको भिडियो पोलिस न्...
कोरोना कहर : लकडाउनमा ल्याम्बोर्गिनी चलाउदा जानुप-यो सेल्फ आइसोलेसनमा
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा एक ब्यक्तिले लकडाउनको समयमा तोकिएको गति भन्दा दुई गुणा बढी गतिमा ल्याम्बोर्गिनी कार चलाएकाले सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नु परेको छ । प्रहरीका अनुसार ट्राफिक उङघलन गर्ने ती चालकको उमेर ३५ वर्षको थियो । ती ब्यक्तिले १६० किलोमिटर प्रति...
विश्वकै पहिलो ट्याटुयुक्त कार बन्यो लेक्ससको कार
के कारमा ट्याटु कोर्न सकिन्छ ? अवश्य पनि सकिदैन । मानिसको छाला जस्तो नरम र प्वाल पार्न सकिने पदार्थ कारमा नहुने भएकाले यसमा ट्याटु बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ । तर कार निर्माता कम्पनी लेक्सस र अनुभवी ट्याटु कलाकार क्लाउडिया डी सेबले यस कुरालाई सम्भव बनाएक...
आहा, मनै रमाउने बोनको टनेल अफ चेरी ट्रिज
जर्मनीको बोनमा ‘टनेल अफ चेरी ट्रिज’ रहेको छ । स्थानीय रुपमा यसलाई हियर्सट्रास भनिन्छ । प्राकृतिक रुपमै बनेकाले यो हेर्दा निकै नै मोहक लाग्छ । अलिकति कृत्रिमता समेत थपिएकाले यो सडकको यात्रा गर्दा मन निकै नै आल्हादित हुन्छ । बोन सहरमा यस्त...
गाडीबाटै अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन मिल्ने चिहान
बुढेसकालमा हुने मृत्युमा श्रीमानले श्रीमतीलाई र श्रीमतीले श्रीमानलाई अन्तिम विदाई गर्न नपाउदा पिडा झन् बढ्ने गर्छ । यस्तो किसिमको समस्या सबै ठाउँमा हुन्छ । जीवनभरका साथी गुमाउदाको पिडालाई केही सजिलो बनाउन अहिले अमेरिकाका विभिन्न चिहानहरुमा...
ह्याकरको प्रयांकका कारण गुगल म्यापले यसरी देखायो हेभी ट्राफिक
ह्याकरहरुले मानिसलाई मात्र होइन, प्रविधिलाई समेत उल्लु बनाउने गरेको उदाहरण हालै सार्वजनिक भएको छ । जर्मनीको बर्लिनका एक कलाकार सिमोन वेकर्टले गुगल म्यापलाई ९९ सेकेन्ड सम्म ह्यान्ड स्मार्टफोनको सहयोगले ह्याक गरे । जसले गर्दा गुगल म्यापले क्लियर रुटला...
रिलायन्सले निर्माण ग¥यो प्लास्टिकबाट ४० किमी सडक, भारतमा यस्तै सडक बनाउने अनुमति माग
भारतमा मुकेश अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले सडक निर्माणका लागि फोहोर प्लास्टिक प्रयोग गर्न नयाँ प्रोजेक्ट लन्च गर्ने भएको छ । रिलायन्सले भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणसँग प्लास्टिकबाट सडक निर्माण गर्ने प्रविधिको प्रयोगलाई अनुमति दिनको...